जून मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
सिबुया स्टेसनमा वर्षाको समयमा बसको लागि लाइनमा बसिरहेका मानिसहरू। वर्षा seasonतु, स्थानीय रूपमा tsuyu वा baiyu रूपमा चिनिन्छ, जुन देखि मध्य जुलाई सम्म जापान मा शुरू हुन्छ = Shutterstock
जूनमा जापानी मौसम! वर्षा मौसम होक्काइडो र ओकिनावा बाहेक >
टोकियोमा जुन महिनामा धेरै वर्षा दिनहरू छन्। आर्द्रता उच्च छ र तापमान स्थिर बढ्दछ। त्यसकारण, जुनमा, तपाईंसँग केहि लुगाहरू हुनु आवश्यक छ जुन तपाईं मौसम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब हामी मिग्ने गर्छौं। यस वर्षाको मौसममा छाता पनि आवश्यक हुन्छ। यस पृष्ठमा, जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटा सन्दर्भमा, म तिमीलाई जून को टोकियो मा मौसम परिचय गराउनेछु।
तल जूनमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ।
वसन्त र ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जूनमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन)
जून २०१ 2018 (२०१ 2017) को सुरूमा टोकियो मौसम
जून २०१yo (२०१ 2018) को बीचमा टोकियो मौसम
टोक्यो मौसम जून २०१ 2018 (२०१)) को अन्तमा
ग्राफ: जूनमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन
टोकियोमा, वर्षा usuallyतु सामान्यतया जुन जुनको सुरूमा सुरू हुन्छ। वर्षाको मौसम करिब एक महिना रहन्छ। त्यस पछि, जुलाई २० तारिखदेखि, साँचो गर्मी टोकियो आउनेछ।
जूनको अन्तमा, तापमान degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यस समयमा, छोटो-बाहुल्याउने गर्मीको लुगाहरू वसन्तको लुगा भन्दा राम्रो हुन्छ।
भर्खरै, टोकियोमा ग्लोबल वार्मिंगका कारण मौसम थोरै परिवर्तन भएको छ। विगतमा, यो वर्षाको मौसममा जूनमा यति वर्षा भएन, तर अब यो वर्षमा निर्भर भारी वर्षा हुनेछ।
तल जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको जूनको लागि मौसम डेटा छ। २०१ 2018 मौसमको लागि एउटा असामान्य वर्ष हो, त्यसैले म २०१ 2017 को मौसम डेटा पनि प्रयोग गर्ने छु। प्यारेन्थेसिसमा नम्बरहरू २०१ 2017 को मौसमविद्हरू हुन्। तपाईले यस डाटालाई यस महिनाको लागि अधिक विशिष्ट मौसमको रूपमा लिनुपर्नेछ।
जुनदेखि जुलाईको पहिलो आधासम्म, जापानमा होक्काइडो र ओकिनावा बाहेक, "त्सुय" भन्ने वर्षाको मौसम जारी छ। यस समयमा धेरै बरस्या दिनहरू छन्, र इमान्दारीपूर्वक यो यात्राका लागि उपयुक्त छैन। तर यस समयमा, उत्कृष्ट फूलहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्दछन्। ती हाइड्रान्जाहरू हुन् जुन म ...
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 32.0 (30.6)
न्यूनतम वायु तापमान 16.9 (15.3)
कुल वर्षा .46.0 19.0.० मिमी (१ .XNUMX .० मिमी)
राम्रो मौसम अनुपात %०% (% 50%)
२ औं, जून, २०१.। शिबिया, टोकियो, जापानमा अवस्थित मेजी मन्दिरको अगाडि, जापान = शटरस्टक
जूनको शुरुमा, टोकियोमा अधिक र अधिक वर्षाका दिनहरू हुनेछन्। तापक्रम बढ्दछ, आर्द्रता जस्तै।
तातो दिनको संख्या बढ्छ तर कहिलेकाँही राम्रा दिनहरू पनि हुन्छन्। यस समयमा तपाईले छोटो-बाहुला शर्टमा थोरै चिसो महसुस गर्नुहोला।
जूनको शुरुमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव :4:२:26 र सूर्यास्त समय १ 18::54 हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 28.8 (30.5)
न्यूनतम वायु तापमान 14.2 (14.8)
कुल वर्षा .89.0 25.5.० मिमी (१ .XNUMX .० मिमी)
राम्रो मौसम अनुपात ११% (% 11%)
जुन १th तारिख २०१:: टोकियोको शाही बगैंचा नजिकै रूखहरू बगैचा, जापान = शटरस्टक
जुन-मध्यमा, वर्षाको दिन टोकियोमा जारी रहनेछ। किनभने तापमान अपेक्षाकृत उच्च छ र आर्द्रता पनि उच्च छ, तपाईं सायद तातो र आर्द्र महसुस गर्नुहुनेछ।
जुनको मध्यमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव :4:२:25 र सूर्यास्त समय १ 18::58 हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 32.9 (30.2)
न्यूनतम वायु तापमान 17.9 (19.1)
कुल वर्षा .20.5 62.0.० मिमी (१ .XNUMX .० मिमी)
राम्रो मौसम अनुपात ११% (% 52%)
जुन २ 24 2018: टोकियो टावरमा पर्यटक टोकियो शहर दृश्य = शटरस्टक अवलोकन गर्दै
जूनको अन्तमा पनि, टोकियोमा वर्षाका दिनहरू जारी रहन्छन्। त्यहाँ धेरै लामो-स्थायी तातो र आर्द्र दिनहरू छन्।
जूनको अन्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव :4:२:26 र सूर्यास्त समय करीव १ :19: १। हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले जून को शुरुवातको लागि of औं समय, जूनको मध्यतिर १ the औं समय र जूनको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
"जून" मा फिर्ता